डि’भोर्सपछि झ’स्किए यी कलाकार, गरेनन् अर्को विवाह ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठग्लामोर फोटो फिचर बलिउड/हलिउड मनोरञ्जन सिनेमाडि’भोर्सपछि झ’स्किए यी कलाकार, गरेनन् अर्को विवाह !
डि’भोर्सपछि झ’स्किए यी कलाकार, गरेनन् अर्को विवाह !
काठमाडौं, विवाहको मामलामा बलिउडको रे’डर्क खासै राम्रो छैन । औलामा गन्न सकिने कलाकारहरुले आफ्नो विवाह ब’चाएर राखेका छन् । धेरैको जिवनमा विवाह भारी परेको छ ।बलिउडमा जति सजिलोसँग विवाह गरिन्छ, त्यो भन्दा सजिलो ढंगबाट डि’भोर्स दिइन्छ । तर केही कलाकार यस्ता पछि छन, जसले डि’भोर्सपछि दोस्रोपटक विवाह गरेका छैनन् । एकै विवाहमा उनीहरुले वैवाहिक जिवन र एक्लो जिवनका बारेमा बुझेका छन् ।मनिषा कोइरालाले २०१० मा नेपाली बि’जनेशम्यान स’म्राट दाहालसँग विवाह गरेकी थिइन् ।
२ बर्षसम्म उनीहरुको बैबाहिक जिवन राम्रै चल्यो । तर २०१० मा उनीहरुको डि’भोर्सको खबर आउँदा बलिउड अचम्ममा परेको थियो । २०१२ मा डि’भोर्स भएपछि मनिषाले दोस्रो विवाह गरिनन् । कल्कि र अनुराग काश्यमले एकपटक खुबै च’र्चा क’माएका थिए। विवाह को केही समय पछि अनुरागको एक अ’फेयरको खबरले अखबरका पाना भरिए । त्यसपछि उनीहरुको डि’भोर्स भयो । २०१५ मा अनुरागले अर्को विवाह गरे । तर कल्की भने अहिलेसम्म सिं’गल छिन् ।संगीताको अ’फेयरको खबर सलमान खानसँग् समेत जो’डिएको थियो ।
दबंग खानसँग अ’लगभएपछि संगीताले मोहम्मद अजहरुद्दनीसँग विवाह गरिन् । उनीहरुको २०१० मा डि’भोर्स भयो । अहिलेसम्म संगीता सिं’गल छिन् ।पुजाले मुम्बईका एक रेस्टुरेन्टका मालिकसँग विवाह गरेकी थिइन् । उनीहरुको २०१४ मा डि’भोर्स भयो । त्यस पछि पुजाले विवाह गरेकी छैनन् ।सैफ अली खानकी पहिली पत्नी अमृता सिंहले १९९१ मा विवाह गरेकी थिइन् ।१३ बर्षपछि उनीहरुको डि’भोर्स भयो ।त्यसपछि अमृताले अर्को विवाह गरेकी छैनन् ।ऋतिक र सुजैनको डि’भोर्सपछि दुवैले विवाह गरेका छैनन्। केही समय अघि ऋतिक र कंगनाको अ’फेयरको ह’ल्ला भने च’लेको थियो । एजेन्सी
आमाको अ’न्तिम संस्कारमा समेत सहभागी हुन पाएनन् अभिनेता इरफान खान
‘तस्बिर धमिलो देख्न थालेँ, यस्तो लाग्छ केही दिनमै आँखाको ज्योति हराउनेछ’: अमिताभ बच्चन
प्रियंका र आयुष्मानले यसरी कसे लगनगाँठो
इन्डोनेसियन आमाकी छोरीले गाइन यती मिठो नेपाली गित !….भिडियो सहित
१४६८८ पटक पढिएको
१३९६४ पटक पढिएको
१११२९ पटक पढिएको
७९५४ पटक पढिएको